PanAust's exploration license sparks concerns | Myanmar Business Today
HomeBusinessPanAust's exploration license sparks concerns
Recently, news of Australia-based mining company PanAust winning the exploration license onamassive area in upper Myanmar sparked online debates and concerns.
One worried netizen wroteaFacebook post expressing her suspicion of the probability of extracting Rare Earth Elements by the company and warning the undesirable consequences of such resource extractions. What follows her post was heated debates on social media with some backing her views while others opposed her views stating that this is just an exploration license and hard to conclude her claim. (Myanmar is ranked at the third place in the list of top countries that produce rare earth elements by statista.com.)
“This accusation is false,” the company told Myanmar Business Today via email. “Our Exploration Licence is for copper and associated minerals. We will proceed to explore for copper and associated minerals in accordance with the terms of our Exploration Licence.”
According to the company, the recent grant of the 750 square-kilometer (165,329 acres) Wuntho3Exploration License complements the Exploration Licences it received in 2016 and 2018. The total tenement holdings cover approximately 1,500 square kilometers (370,658.11 acres). The exploration tenements cover an area that spans Banmauk, Pinlebu, and Wuntho Townships in Sagaing Region.
Wuntho 1 site map
In Myanmar, PanAust holdsa90 percent interest in Wuntho Resources Company Limited (WRCL),ajoint venture with Myanmar Energy Resources Group International Company Limited (MERG),aMyanmar-based company which holds the remaining 10 percent of WRCL. WRCL holds seven Exploration Licences that encompass approximately 1,500 square-kilometers in the Sagaing Region, which is twice the size of Singapore.
The first three exploration licenses were granted in January 2016, receiving very little media coverage and public interest. The company obtained Wuntho Township approval on4June 2019.
“After meeting with Sagaing Region Chief Minister and explaining our exploration intension we received approval from the Sagaing Region Cabinet on 29 July 2019,” the company said in the email.
However, in Eleven Media Group’s article,aregional lawmaker and an authority said they do not know the details of the exploration, to which the company responded, “the process for obtaining prospecting and Exploration Licences in Myanmar involves obtaining countless approvals from various government Departments at the Township, District, Region, and Union Levels. It is not possible to obtain an Exploration Licence with only approval from the Union Government.”
The Union Government approved three further licenses on May 27 this year. An airborne electromagnetic survey of the Company’s tenements was proposed for early 2020, according to the company’s activities report.
Under the existing mining law, regional and state governments do not have the authority to approve large scale mining projects, which need approval from the Union Government.
Concerns regarding environmental impacts, compensation, the impact on people’s livelihoods, and resettlement emerged following the announcement of receiving seventh exploration license.
However, the company assured that “our Exploration Licences permit us to conduct exploration activities in our tenement area, not mining operations.”
Anyhow, people feeling strong mistrust on resource extraction projects are worried, especially by the fact that PanAust is held byaChinese state-owned company. PanAust is an Australian incorporated company that is owned by Guangdong Rising H.K. (Holding) Limited which isawholly-owned subsidiary of Guangdong Rising Assets Management Co. Ltd (GRAM),aChinese state-owned company regulated under the State-owned Assets Supervision and Administration Commission, the People’s Government of the Guangdong Province in China. However, PanAust claims that they operate under the rules and regulations of Australia and the Chinese state-owned company only holds assets.
Thus, this project, experts warn, can backfire the ruling NLD government because it can be used asapolitical tool by the opposition since the general election is set to hold in November.
“The ruling government needs to be cautious and address this subtly, otherwise this issue can be politicized in the coming general election,” Dr. Than Lwin Oo, Senior Lecturer at the Department of International Relations, University of Yangon, said.
People are also concerned that the country might not get enough profit from the project while the company enjoysalion’s share; they are interested in how the company and the government have agreed upon profit-sharing.
However, the company said, “Prospecting and exploration by definition are not revenue-generating activities. PanAust activities in Myanmar, therefore, are not generating profits for the Company and there is no profit sharing between the Government of Myanmar and PanAust.”
When the company has found the mineral it is looking for, it will have to, according to the procedure, apply for an extraction license. If it, unfortunately, does not get the extraction license, it may sell its data to the license winner.
မကြာသေခင်းက သြစတြေးလျအခြေစိုက် သတ္တုတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီ Panaust ကို မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်း ဝန်းသိုတွင် သတ္တုရှာဖွေရေးလိုင်စင်ချထားပေးလိုက်သည့် သတင်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ လူမှုကွန်ရက်သုံးစွဲသူများအကြား ဝေဖန်အငြင်းပွားမှုများ၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။
လူမှုကွန်ရက်သုံးစွဲသူတစ်ဦးက အဆိုပါ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ရှားပါးသတ္တုခေါ် Rare Earth Element များ ထုတ်လုပ်နိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်းနှင့် ယင်း၏အကျိုးဆက်များအကြောင်း သတိပေးရေးသားထားသော ဖေ့စ်ဘုတ်တွင် ရေးသားခဲ့သည်။ ထို့နောက်တွင် အဆိုပါကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ထောက်ခံသူ၊ ဆန့်ကျင်သူများအကြား အငြင်းပွားမှုများပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ (မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် rare earth element ထုတ်လုပ်မှုအများဆုံး နိုင်ငံများအနက် တတိယနေရာတွင်ရှိသည်ဟု statista.com က ဆိုသည်)
“ဒီစွပ်စွဲမှုက မမှန်ပါဘူး” ဟု Panaust ကုမ္ပဏီက Myanmar Business Todayကို အီးမေးလ်မှ တစ်ဆင့်ဖြေကြားခဲ့သည်။ “ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သတ္တုရှာဖွေရေးလိုင်စင်ဟာ ကြေးနီနဲ့ တခြားဆက်စပ်သတ္တုတွေ အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သတ္တုရှာဖွေရေးလိုင်စင်ပါ သတ်မှတ်ချက်တွေအတိုင်းပဲ ကြေးနီနဲ့ တခြား ဆက်စပ်သတ္တုတွေကို ရှာဖွေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ကုမ္ပဏီက ဆိုသည်။
ကုမ္ပဏီက Myanmar Business Today ထံ ပြန်ကြားသော အီးမေးလ်ပါ အချက်အလက်များအရ ယခုအသစ်ချထားပေးသော ၇၅၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၁၆၅၃၂၉ ဧက)ကျယ်ဝန်းသည့် ဝန်းသို၃ သတ္တုရှာဖွေရေးလိုင်စင်သည် ၂၀၁၆ နှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်က ကုမ္ပဏီရရှိထားသော ရှာဖွေရေးလိုင်စင်များနှင့် ဆက်စပ်သည်။ ယခုလိုင်စင်ခွင့်ပြုနယ်မြေရောပေါင်းလျှင် ရှာဖွေခွင့်လုပ်ကွက်မှာ ၁၅၀၀ စတုရန်း ကီလိုမီတာ (၃၇၀၆၅၈ဒသမ၁၁ ဧက) ရှိမည်ဖြစ်သည်။ ရှာဖွေရေးလုပ်ကွက်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရှိ ဗန်းမောက်၊ ပင်လယ်ဘူးနှင့် ဝန်းသိုမြို့နယ်တို့တွင်တည်ရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် PanAust သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် မြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက် Myanmar Energy Resources Group International Company Limited (MERG)နှင့် အကျိုးတူပူးပေါင်းလျက် Wuntho Resources Company Limited (MRCL) ကို တည်ထောင်ထားသည်။ အဆိုပါ ကုမ္ပဏီတွင် PanAust က ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းပိုင်ဆိုင်ထားပြီး MERGက ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ WRCL သည် ယခုအသစ် ချပေးလိုက်သော လိုင်စင်အပါအဝင် စစ်ကိုင်းတိုင်းတွင် ဧရိယာစတုရန်း ၁၅၀၀ ကျယ်ဝန်းသည့် နယ်မြေပေါ်တွင် ရှာဖွေခွင့်လိုင်စင် ခုနစ်ခု ရရှိထားသည်။ အဆိုပါ ဧရိယာမှာ စင်ကာပူနိုင်ငံအကျယ်အဝန်း၏ နှစ်ဆမျှရှိသည်။
အဆိုပါ ရှာဖွေခွင့်ခုနစ်ခုအနက် သုံးခုကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလက ချထားပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး သတင်းမီဒီယာတွင်ဖော်ပြမှုအနည်းငယ်သာရှိခဲ့သကဲ့သို့ လူစိတ်ဝင်စားမှုလည်း သိပ်မရှိခဲ့ပေ။ ထို့နောက် ၂၀၁၉ ဇွန်လ ၄ ရက်တွင် ဝန်းသိုမြို့နယ်လုပ်ကွက်အတွက် လိုင်စင်ရခဲ့သည်။
“စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ တွေ့ဆုံပြီး ကျွန်တော်တို့ ရှာဖွေလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကို ရှင်းပြပြီးတဲ့နောက် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၂၉ မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ အတည်ပြုချက်ရရှိခဲ့ပါတယ်” ဟု ကုမ္ပဏီက ဆိုသည်။
သို့သော် Eleven Media Group ၏ သတင်း တွင်တော့ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှင့် ဝန်ကြီးက အဆိုပါ ကိစ္စကို အသေးစိတ်မသိရှိကြောင်း ပြောကြသည်။ ထိုကဲ့သို့ ပြောဆိုချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ကုမ္ပဏီဘက်ကတော့ “မြန်မာနိုင်ငံမှာ စူးစမ်းရှာဖွေရေးလိုင်စင်လျှောက်ထားတဲ့ လုပ်ငန်းစဥ်မှာ မြို့နယ်အဆင့်၊ ခရိုင်အဆင့်၊ တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အစိုးရဌာနတွေဆီကနေ မရေမတွက်နိုင်တဲ့ အတည်ပြုချက်တွေ အရင်ရယူရပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရတစ်ခုတည်းဆီကနေ ရှာဖွေရေးလိုင်စင်ရဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး” ဟုဆိုသည်။
ပြည်ထောင်စုအစိုးရက နောက်ထပ် လိုင်စင်များကို ယခုနှစ်မေလ ၂၇ ရက်တွင် ချထားပေးခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ခွင့်ပြုနယ်မြေအတွင်းတွင် Airborne electromagnetic survey စနစ်ဖြင့် သတ္တုရှာဖွေခြင်းကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်အစောပိုင်းက အဆိုပြုတင်ပြထားကြောင်း ကုမ္ပဏီ၏ ဆောင်ရွက်ချက် အစီရင်ခံစာ ထဲတွင် ဖော်ပြထားသည်။
တည်ဆဲ သတ္တုတူးဖော်ရေးဥပဒ အရ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရတို့အနေဖြင့် အကြီးစားသတ္တုတူးဖော်ရေး လုပ်ကွက်များကို အတည်ပြုချထားပေးခွင့်မရှိဘဲ အသေးစားလုပ်ကွက်များကိုသာ ချထားပေးခွင့်ရှိသည်။
ခုနစ်ခုမြောက် ရှာဖွေရေးလိုင်စင်ထုတ်ပေးပြီးနောက်တွင် အဆိုပါ ဒေသတွင် လုပ်ဆောင်လာမည့် သတ္တုတူးဖော်ရေး၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုများ၊ လျော်ကြေးကိစ္စများ၊ ဒေသခံပြည်သူများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအပေါ် ထိခိုက်မှုများ၊ ပြည်လည်နေရာချထားရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် ကိစ္စရပ်များအပေါ် စိုးရိမ်ပူပန်းမှုများပေါ်ပေါက်လာသည်။
သို့သော် ကုမ္ပဏီကတော့ “ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရှာဖွေခွင့်လိုင်စင်ဟာ ကျွန်တော်တို့ကို သတ်မှတ်နယ်မြေထဲမှာ သတ္တုရှာဖွေရေးပဲ ခွင့်ပြုထားတာပါ။ တူးဖော်ရေးကို ခွင့်ပြုမထားဘူး”ဟု ဆိုသည်။
သို့သော် သယံဇာတတူးဖော်ရေးစီမံကိန်းများအပေါ် အယုံအကြည်မရှိသော ပြည်သူများကတော့ စိုးရိမ်ပူပနေနေကြသည်။ အထူးသဖြင့် PanAust မှာ တရုတ်အစိုးရပိုင်ကုမ္ပဏီဖြစ်နေသည့်အချက်ြဖစ်သည်။ သြစတြေးလျအခြေစိုက် အဆိုပါ ကုမ္ပဏီကို Guangdong Rising H.K. (Holding) Limited က ပိုင်ဆိုင်သည်။ ယင်းကုမ္ပဏီမှာလည်း တရုတ်နိုင်ငံ ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ် ပြည်သူ့အစိုးရလက်အောက် နိုင်ငံပိုင် ပိုင်ဆိုင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မရှင်လက်အောက်ရှိ အစိုးရပိုင် Guangdong Rising Assets Management Co. Ltd (GRAM) ကုမ္ပဏီက အပြည့်အဝပိုင်သည့် လက်ခွဲကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ PanAust ကတော့ ၎င်းတို့အနေဖြင့် သြစတြေးလျနိုင်ငံ ဥပဒေ စည်းမျဥ်းများအတိုင်း လည်ပတ်ခြင်းဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံပိုင်ကုမ္ပဏီမှာ ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသာ ချုပ်ကိုင်ထားခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။
လာမည့် နိုဝင်ဘာလတွင် ရွေးကောက်ပွဲလည်း ကျင်းပတော့မည်ဖြစ်ကာ ယခုစီမံကိန်းမှာ အတိုက်အခံများဘက်မှ နိုင်ငံရေးလက်နက်သဖွယ်အသုံးပြုလာနိုင်သောကြောင့် လက်ရှိ NLD အစိုးရအတွက် အခက်ကြုံရနိုင်သည်ဟု ကျွမ်းကျင်သူများက သုံးသပ်သည်။
“အာဏာရအစိုးရအနေနဲ့ ဒီကိစ္စကို ကောင်းကောင်းကိုင်တွယ်တတ်ဖို့ လိုတယ်။ မဟုတ်ရင် ဒီကိစ္စဟာ လာမယ့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာ နိုင်ငံရေးလက်နက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်”ဟု ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာနမှ ကထိက ဒေါက်တာ သန်းလွင်ဦးက Myanmar Business Today သို့ ပြောသည်။
အဆိုပါ စီမံကိန်းမှ အကျိုးအမြတ်များကို ကုမ္ပဏီက အများအပြားရနေချိန်တွင် နိုင်ငံတော်အနေဖြင့် အကျိုးအမြတ်မရမည်ကို ပြည်သူများက စိုးရိမ်နေကြပြီး ကုမ္ပဏီနှင့် အစိုးရအကြား အကျိုးအမြတ်ခွဲဝေမှုကို မည်သို့ စီမံဆောင်ရွက်မည်ကို စိတ်ဝင်စားနေကြသည်။
ကုမ္ပဏီကတော့ “စူးစမ်းရှာဖွေမှုဟာ သဘောတရားအားဖြင့်တော့ ဝင်ငွေရတဲ့လုပ်ငန်းတွေမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဆောင်ရွက်နေတဲ့ PanAust ရဲ့ လုပ်ငန်းတွေကလည်း ကုမ္ပဏီအတွက် အကျိုးအမြတ် မဖန်တီးနိုင်သေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး အစိုးရနဲ့ ကုမ္ပဏီအကြားမှာ အကျိုးအမြတ်ခွဲဝေမှုရှိဦးမှာမဟုတ်ပါဘူး”ဟုဆိုသည်။
ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ရှာဖွေနေသော ဓာတ်သတ္တုကို တွေ့ရှိခဲ့ပါက တူးဖော်ခွင့်လိုင်စင်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ တူးဖော်ခွင့်လိုင်စင်မရခဲ့ပါက ရရှိသည့် ကုမ္ပဏီထံ ၎င်းတို့ စူးစပ်းရှာဖွေထားသော ဓာတ်သတ္တုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ပြည်လည် ရောင်းချနိုင်သည်။
Previous articlePropertyGuru introduces new categories for its property awards program
Next articleCovid-19 situation in Myanmar